Friends of MoeMaKa - Free Burma News Collection | Archives | 2014 | April
Posted on April 30, 2014 by People's Rallying Cry
အရေးပေါ်ကြားဖြတ်သတင်း (BREAKING NEWS) *********************************** လယ်တီသိ…
အရေးပေါ်ကြားဖြတ်သတင်း (BREAKING NEWS)
လယ်တီသိမ်ကို ဖျက်ဆီးဖြိုချရာမှ တွေ့ ရှိရသော ဌာပနာများ ပျောက်ဆုံးနေကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ တရုတ်များ ခိုးယူထားသည်လော အာဏာပိုင်များ ခိုးယူသွားသည်လော မသိရှိရသေးပါ။
စေတီနှင့် သိမ်ကိုဖျက်ဆီးကာ ကြေးနီသိုက်ကို တူးယူကြရုံသာမက ဘုရားဌာပနာများကိုပါ ခိုးယူတိုက်ယူကုန်ကြပြီ ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းတွင် အလွန်အင်မတန် အယုတ်ဆိုး အကျည်းတန်လှသော သာသနာဖျက်သည့် လုပ်ရပ်ကြီးပင် ဖြစ်တော့သည်။
Posted on April 30, 2014 by Assistance Association for Political Prisoners (Burma)
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2014-04-30 15:39:45
မတ်လ ၁ရက်က ထွန်တုံးတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သည့် တံငါမြောင်းကျေးရွာမှ တောင်သူလေးဦးကို ဖမ်းဆီးထားခြင်းကြောင့် ထွန်တုံးတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သည့် တောင်သူများက ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်
မတ္တရာမြို့နယ် တရားရုံးရှေ့တွင် ဧပြီလ ၂၉ရက်က ကမ္ဘာမကြေသီချင်း သီဆိုနေသည်ကို တွေ့ရစဉ်။ (ဓာတ်ပုံ- အောင်ကိုဦး) တံငါမြောင်းကျေးရွာမှ လယ်သိမ်းဆည်းခံရသည့် တောင်သူများသည် မတ်လ ၁ရက်က ထွန်တုံးတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သဖြင့်
တောင်သူ ၃၉ဦးကို တရားစွဲဆိုထားခဲ့ပြီး ဧပြီလ ၁၁ရက်က တောင်သူ ကိုရဲရင့်အောင်နှင့် ဦးဇော်ဝင်းတို့ကို ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး ဧပြီလ ၂၉ရက်တွင် ဦးလေဝင်းနှင့် ဦးကိုကိုအောင်
တို့ကို ထပ်မံဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ ထွန်တုံးတိုက်ပွဲဝင်သည့် တောင်သူများကို ပုဒ်မ ၄၄၇၊ ပုဒ်မ ၁၁၄၊ ပုဒ်မ ၁၅၄၊ ပုဒ်မ ၁၈တို့ဖြင့် တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။
လက်ပံတောင်းတောင် စီမံကိန်းရှိ လယ်တီသိမ်ကို အပြီးဖြိုဖျက် | DVB
Lead Storyလယ်သမားသတင်းလက်ပံတောင်းတောင် စီမံကိန်းရှိ လယ်တီသိမ်ကို အပြီးဖြိုဖျက်By ထွန်းထွန်းသိန်း 30 April 2014 Print EmailTweet Email This Story : Your NameYour EmailReciever EmailYour MessageSend Storyစစ်ကိုင်းတိုင်း မုံရွာခရိုင် ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် လက်ပံတောင်းတောင် စီမံကိန်းမှာ ရှိတဲ့ လယ်တီသိမ်ကို…
အရေးပေါ် ကြားဖြတ်သတင်း (BREAKING NEWS) ******************************** လယ်တီသိမ်…
အရေးပေါ် ကြားဖြတ်သတင်း (BREAKING NEWS)
လယ်တီသိမ်ကို အပြီးတိုင် ဖြိုချဖျက်ဆီးလိုက်ပါပြီ။ အနယ်နယ် အရပ်ရပ်မှ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် သူတော်စင်အပေါင်းတို့ အနေဖြင့် ယခုကဲ့သို့ သာသနာကို ဖျက်ဆီးပြီး စီးပွားရှာ တိုင်းပြည်ကိုရောင်းစားသည့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးသိန်းစိန်အစိုးရကို ရှုတ်ချကန့် ကွက် ဆန္ဒပြကြရန် အမျိုး ဘာသာ သာသနာအကျိုးမျှော်၍ နှိုးဆော်လိုက်ရပါသည်။
Posted on April 30, 2014 by Lazaru
Posted in INT'l COMMENTARY, Kachin States	| Tagged BERTIL LINTNER / THE IRRAWADDY, N Gun Ja Wa	|
Posted on April 29, 2014 by freeburma
ကုလသမဂ္ဂ လက်အောက်ခံ အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ နိုင်ငံတကာက လူမှုရေး အကူအညီတွေပေးနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ ရခိုင်ပြည် နယ်တွင်း အကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းတွေ ပုံမှန်လည်ပတ်နိုင် ဖို့အတွက် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၊ နယ်စပ်ရေးရာ ဒုတိယဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ် မောင်မောင်အုန်း၊ ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ် ကျော်ကျော်ထွန်းတို့ ဟာ စစ်တွေမြို့က ရပ်မိရပ်ဖတွေနဲ့ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှာ ဒီကနေ့ သီးသန့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
via သတင်းများ http://ift.tt/1kkD07d
စဉ့်ကိုင်မှာ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး ဆန္ဒပြခေါင်းဆောင် ၅ ဦးကို တရားစွဲဆို
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး စဥ့်ကိုင်မြို့မှာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးအတွက် ဦးဆောင်ဆန္ဒပြခဲ့သူ ၅ဦးကို တရားမ၀င် စီတန်းလှည့် လည်ခြင်းဆိုင်ရာ ပုဒ်မ ၁၈၊ ခွင့်ပြုချက်နဲ့မညီဘဲ ဆန္ဒပြမှု ပုဒ်မ ၁၉ တို့နဲ့ မနေ့က တရားစွဲလိုက်ပြီး မြို့နယ်တရားရုံးမှာ ဒီနေ့ ရုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
via သတင်းများ http://ift.tt/1iEsc5Y
ပြည်တွင်းစစ်ကြာရှည်ရခြင်းအကြောင်း KNU နဲ့ UWSA ဘယ်လိုသုံးသပ်သလဲ
via The Irrawaddy’s Blog http://ift.tt/1kd5xKo
via သတင်းများ http://ift.tt/1o0v6SJ
Posted in LAWS - ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ	| Tagged Feedly, IFTTT, Laws, NLD, Recently Read	| Leaveacomment |
”သတင်းထောက်များ ထောင်ချခံနေရသည့် အတွက် မီဒီယာသမားများ အရေးပေါ် အစည်းအဝေး ကျင်းပ’…
via Tomorrow’s Facebook Wall http://ift.tt/POMrlA
အပစ်ရပ်ရေးဆက်ဆွေးနွေးဖို့ တိုင်းရင်းခေါင်းဆောင်တွေ ဆုံးဖြတ်
အစိုးရနဲ့ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေကြား လက်ရှိရရှိထားတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု ရလဒ်တွေကို မပျက်စီးစေချင်တဲ့အတွက် အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့နဲ့ “တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့” NCCT ရဲ့ တပြည်လုံး အတိုင်းအတာနဲ့ အပစ်ရပ်ရေး ဆက် ဆွေးနွေးသွားကြဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်လို့ NCCT အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် နိုင်ဟံသာက ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ၁၆ ဖွဲ့နဲ့ ပူးပေါင်းထားတဲ့ NCCT ရဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့က နှစ်ရက်တာ…
via Voice of America http://ift.tt/1mX8u5P
ပဋိပက္ခတွေ ဖြေရှင်းရေး ကျောက်ဖြူ ညီလာခံမှာ ဆွေးနွေး
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းက ပဋိပက္ခတွေကို ဖြေရှင်း နိုင်ဖို့အတွက် အစိုးရ အနေနဲ့ ၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသား ဖြစ်မှု ဥပဒေအတိုင်း အမြန်ဆုံး အကောင်အထည် ဖော်ပေးဖို့ လိုအပ်တဲ့ အကြောင်း ဒီနေ့ ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူမြို့မှာ ကျင်းပနေတဲ့ ရခိုင်အမျိုးသား ညီလာခံ ၃ ရက်မြောက်နေ့မှာ ဆွေးနွေးကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ ညီလာခံမှာ ပြည်နယ်တွင်းပဋိပက္ခတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ ဆွေးနွေးအဖြေရှာကြရာမှာ
via သစ်ထူးလွင် (နေ့စဉ်သတင်း) – Thit Htoo Lwin http://ift.tt/QVWYwx
ကေအိုင်အို ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့က အစိုးရနဲ့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးလိုတယ်လို့ အကြောင်းကြားစာ ပို့လိုက်ပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာ NCCT တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ကလည်း မေလ နောက်ဆုံးအပတ်မှာ အစိုးရနဲ့ တွေ့ဆုံမယ်လို့ ဒီကနေ့ပဲ ဆုံးဖြတ်ချက် ချလိုက်ပါတယ်။ အကြောင်းစုံကို ဘန်ကောက်က ဦးဝင်းမြင့်က ပြောပြထားပါတယ်။
အစိုးရနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ ကေအိုင်အို အကြောင်းကြားစာပို့
ကေအိုင်အို ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့က အစိုးရနဲ့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးလိုတယ်လို့ အကြောင်းကြားစာ ပို့လိုက်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာ NCCT တိုင်းရင်းသား လူမျိုးမ…
via BBC Burmese’s Facebook Wall http://ift.tt/1hOiVHP
via သတင်း http://ift.tt/PO8wAS
ရှမ်းတောင်နှင့်မြောက် တပ်မတော် နှစ်ခု ပူးပေါင်းနိုင်ရေး မူဝါဒများ ညှိနှိုင်းနေ
ရှမ်းပြည် တွင်းရှိ အင်အားကြီး လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ နှစ်ခု ဖြစ်သည့် ရှမ်းတောင် နှင့် မြောက် တပ်မတော် နှစ်ရပ် တို့သည် ပြည်သူ လူထုများ၏ ဆန္ဒ အရ ပေါင်းစည်း နိုင်ရန် အတွက် နှစ်ဖက် အကြား အခြေခံ ကျသည့် မူဝါဒ ရေးရာ များကို ညှိနှိုင်းလျက် ရှိကြောင်း နှစ်ဖက် ပြောရေး ဆိုခွင့် ရှိသူများ ဖြစ်ကြသည့် ရှမ်းမြောက် တပ်တော်မှ ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီး စိုင်းလှနှင့် ရှမ်းတောင် တပ်မတော်မှ ဗိုလ်မှူး ဆိုင်းလောင်းစိုင် တို့က ပြောကြားသည်။
ရှမ်းပြည် ပြည်လည် ထူထောင်ရေး ကောင်စီ တပ်မတော် (RCSS/SSA) မှ ပြောရေး ဆိုခွင့် ရှိသူ ဗိုလ်မှူး ဆိုင်းလောင်းစိုင် က “တူတာတွေ တွဲလုပ်တယ် ၊ မတူ တာတွေ ခွဲလုပ် ကြတယ် ၊ အရင်တုန်းက တစ်ဖွဲ့တည်း ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အခြေအနေမျိုး ဖြစ်တဲ့ အထိ ရောက်အောင်တော့ တော်တော် အချိန်ယူ ရဦးမယ်” ဟု ဗိုလ်မှူး စိုင်းလောင်းဆိုင်က ပြောသည်။
ထို့အတူ ရှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်း တပ်မတော်မှ ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီး စိုင်းလှကလည်း “အခုက ကျွှန်တော်တို့ သူတို့ (ရှမ်းတောင်) တပ်မတော် ဘက်က တာဝန် ရှိတဲ့ သူတွေနဲ့ ကျွှန်တော်တို့ ဖက်က တွေ့ပြီးတော့ အခု လောလော ဆယ်တော့ သူတို့ ပေါ်လစီတွေ ပြီးတော့ ကျွှန်တော်တို့ ပေါ်လစီ ကွာဟ ချက်တွေ ပြန်ညှိနှိုင်း နေတယ်” ဟု ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီး စိုင်းလှက အတည်ပြု ပြောကြားသည်။
ထိုသို့ ရှမ်းတပ်မတော် နှစ်ရပ် တစ်ခုတည်း ဖြစ်ရေး ပေါင်းစည်း နိုင်ရန် အတွက် ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီလ (၉) ရက်နေ့တွင် ရှမ်းပြည်သူ လူထု များနှင့် သံဃာတော် များက သက်ဆိုင်ရာ တပ်မတော် နှစ်ရပ် ဆီသို့ တောင်းဆို ထားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုမတိုင်ခင် ကာလ များ၌လည်း ရှမ်းညီညွတ်ရေး အင်အားစု များမှ ပေါင်းစည်း နိုင်ရေး ဖိအားပေး ညှိနှိုင်း မှုများ ရှိခဲ့ကြောင်း RCSS/SSA မှ ဗိုလ်မှူး ဆိုင်းလောင်းစိုင်က ဆိုပါသည်။
လက်ရှိ၌ ညှိနှိုင်း ရရှိပြီး ဖြစ်သည့် သဘော တူညီ ချက်များကို ပူးတွဲ အကောင်အထည် ဖော်ခြင်းနှင့် မတူညီ သေးသည့် ညှိနှိုင်း ချက်များကို ဆက်လက် ညှိနှိုင်း နေကြဆဲ ဖြစ်ကြောင်း ဗိုလ်မှူး စိုင်းလောင်းဆိုင်က ဆိုပါသည်။
ရှမ်းတောင်နှင့် ရှမ်းမြောက် တပ်တော် နှစ်ရပ် တို့သည် ယခင်နှစ်ဖွဲ့ ကွဲနေစဉ်၌ တစ်ဖွဲ့နှင့် တစ်ဖွဲ့အကြား တိုက်ခိုက်မှု ရှိခဲ့သည် အထိ ဖြစ်ခဲ့ကြသည်ဟု ဗိုလ်မှူး ဆိုင်းလောင်းစိုင်က ပြောသည်။ သို့သော်လည်း လက်ရှိ အနေအ ထား၌မူ အမျိုးသား စည်းလုံး ညီညွှတ်ရေး အတွက် ပြည်သူများ အပါအဝင် အောက်ခြေ တပ်မှူး အဆင့်များကလည်း ပူးပေါင်းရန် လိုလားလျက် ရှိကြောင်း ဗိုလ်မှူး စိုင်းလောင်းစိုင်က ဆိုပါသည်။
သို့သော်လည်း တစ်မတော်နှစ်ခု တစ်ခုတည်း ဖြစ်ရေး အတွက်မူ အချိန် ယူရဦးမည် ဖြစ်ကာ မည်မျှ ကြာမြင့်မည် ဖြစ်ကြောင်းကိုမူ မခန့်မှန်း နိုင်သေးကြောင်း နှစ်ဖက် ပြောရေး ဆိုခွင့် ရှိသူ များက ဆိုကြပါသည်။
ရှမ်းပြည် တပ်တော်အား ၁၉၆၄ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ညောင်ရွှေ စော်ဘွားကြီး စဝ်ရွှေသိုက်၏ မဟာဒေဝီ စဝ်မယ့် နန်းဟိန်းခမ်းမှ ဦးစီး ဦးဆောင် ပြုကာ တည်ထောင် ခဲ့သည်။
စတင် ဖွဲ့စည်း စဉ်၌ ရှမ်းပြည် လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (SSIA), ညီညွတ်သော ရှမ်းအမျိုးသား တပ်ပေါင်းစု (SNUF), ကိုးကန့် တော်လှန်ရေး တပ်မတော် (KRF), ရှမ်းပြည် ညီညွတ်ရေး တပ်မတော် (SUA) တို့ ပါဝင် ခဲ့သည်။ ခေါင်းဆောင်များ အဖြစ် ထိုစဉ်က စဝ်ကွဏ်းဇိဏ်း (SNUF), လုံးခွန်မဟာ (SSIA), ကျင်မီယန်း (KRF), ခွန်ဆာ (SUA) တို့မှ ဦးဆောင် ပါဝင်၍ ဖွဲ့စည်း ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ထို့နောက်တွင် ရှမ်းပြည် တပ်မတော် အတွင်း ကွန်မြူနစ် ဝါဒကို ထောက်ခံသည့် အုပ်စုနှင့် ဆန့်ကျင်သည့် အုပ်စု ဟူ၍ နှစ်ခြမ်း ကွဲရကာ ထောက်ခံသည့် အုပ်စုမှ လက်ရှိ ရှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်း တပ်မတော်၏ ခေါင်းဆောင် ဖြစ်သည့် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ပန်ဖှ မှ SSPP/SSA ကို တည်ထောင် ခဲ့သည်။ လက်မခံသည့် အဖွဲ့ကမှ SURA အဖွဲ့အား တည်ထောင် ခဲ့သည်။
ထို့ နောက်တွင် SURA နှင့် ရှမ်းပြည် ညီညွတ်ရေး တပ်မတော် (SUA) တို့ တစ်ဖန် ပြည်လည် ပေါင်းစည်းကာ မုန်တိုင်း အာမီ (MTA) အဖြစ်သို့ ၁၉၈၅ ခုနှစ် ဧပြီ လတွင် ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
ထိုမှ ဆက်၌ ၁၉၉၆ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ လ၌ ခွန်ဆာ ဦးဆောင်သည့် (MTA) အဖွဲ့မှ နိုင်ငံတော် အေးချမ်း သာယာ ရေးနှင့် ဖွံဖြိုးရေး ကောင်စီ ထံ၌ လက်နက် ချသည်ကို လက်မခံသည် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရွက်ဆစ်နှင့် ၎င်းအား ထောက်ခံသည့် အင်အား (၁၀၀၀) ခန့်တို့က RCSS/SSA အား ပြန်လည် စုဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ရှမ်းပြည် တပ်မတော်အား စတင် ဖွဲ့စည်းစဉ် ပါဝင် ခဲ့သူ များအနက် SSPP/SSA နာယက ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဆေထင် တစ်ဦးသာ ယနေ့ အထိ သက်ရှိ ထင်ရှား ကျန်ရစ်လျက် ရှိသည်။
သမိုင်း တစ်လျှောက် ကွဲပြားလျက်ရှိနေသေးသည့် ရှမ်းလက်နက်ကိုင် တပ်မတော် များအား ပေါင်းစည်း နိုင်ရန် အတွက် ခေါင်းဆောင်ကြီးများ အဆက်ဆက်မှ ကြိုးပမ်း ခဲ့သော်လည်း အောင်မြင်မှု မရရှိ ခဲ့သေးပေ။
via သတင်း http://ift.tt/1jdslgw
တပြည်လုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ဆွေးနွေးနေစဉ် ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းမှာ တိုက်ပွဲတွေ ထပ်မံ ဖြစ်ပွားလာတာကို ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့အတွက် ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ KIO က ဒီကနေ့ ကမ်းလှမ်းလိုက်ပါတယ်။
ဒီတွေ့ဆုံပွဲဟာ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီနဲ့ KIO တို့ သီးသန့်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပြီး ဆွေးနွေးပွဲအလားအလာကို ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်းရဲ့ သတင်းထောက် ကိုမိုးဇော်က…
via Voice of America http://ift.tt/1ha71UU
Posted on April 29, 2014 by Assistance Association for Political Prisoners (Burma)
Ms. Laetitia Bonnet (Lead Researcher Burma) of the Asia Justice and Rights (AJAR…
Ms. Laetitia Bonnet (Lead Researcher Burma) of the Asia Justice and Rights (AJAR) met with AAPP and FPPS on 29.4.2014 at the AAPP office (Yangon branch), to collaborate and share information about human rights. Ko Tin Maung Oo, Ko Ye Aung and Ko Tun Kyi members of FPPS and Ko Bo Kyi and Zaw Moe from AAPP attended this meeting.
AAPP & FPPs meeting with Laetitia Bonnet (29-4-2014)
Posted on April 28, 2014 by freeburma
အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကိစ္စ NCCT ခေါင်းဆောင်များ ညှိနှိုင်း လာမယ့် မေလဆန်းမှာကျင်းပမယ့်…
via RFA Burmese’s Facebook Wall http://ift.tt/1rGED3u
via Shan News http://ift.tt/QQgavA